मर्कूस २ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद
२ तथापि, केही दिनपछि उहाँ फेरि कफर्नहुम पस्नुभयो र उहाँ घरमै हुनुहुन्छ भन्ने खबर फैलियो। २ फलस्वरूप, थुप्रै मानिस भेला भए, यहाँसम्म कि ढोकाभित्र छिर्नसमेत नमिल्ने गरी घरभरि खचाखच मानिसहरू भए अनि उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको वचन सुनाउन थाल्नुभयो। ३ अनि पक्षाघात भएको एक जना मानिसलाई चार जनाले बोकेर उहाँकहाँ ल्याउँदै थिए। ४ तर भीडले गर्दा तिनीहरूले उसलाई येशूको अगाडि पुऱ्याउन सकेनन्‌। त्यसैले उहाँ बसिरहनुभएको ठाउँमाथिको छाना उघारेर तिनीहरूले पक्षाघात भएको त्यस मानिसलाई खाटसमेत त्यहाँबाट तल ओह्राले। ५ अनि तिनीहरूको विश्वास देखेर येशूले पक्षाघात भएको त्यस मानिसलाई भन्नुभयो: “बाबु, तिम्रो पाप क्षमा भयो।” ६ तब त्यहाँ बसिरहेका केही शास्त्रीहरू मनमनै यस्तो तर्क गर्दै थिए: ७ “यस मानिसले किन यसरी कुरा गर्दैछ? यसले त परमेश्वरको निन्दा गर्दैछ। परमेश्वरबाहेक अरू कसले पाप क्षमा गर्न सक्छ र?” ८ तिनीहरू मनमनै त्यसरी तर्क गर्दैछन्‌ भन्ने तुरुन्तै चाल पाएर येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “तिमीहरू किन आफ्नो मनमा यस्तो तर्क गर्दैछौ? ९ पक्षाघात भएको मानिसलाई के भन्न सजिलो छ, ‘तिम्रो पाप क्षमा भयो’ भन्न कि ‘उठ अनि तिम्रो खाट बोकेर जाऊ’ भन्न? १० तैपनि मानिसको छोरासित पृथ्वीमा पाप क्षमा गर्ने अख्तियार छ भन्ने तिमीहरूले बुझ।” . . . उहाँले पक्षाघात भएको त्यस मानिसलाई भन्नुभयो: ११ “म तिमीलाई भन्छु, उठ, तिम्रो खाट बोक अनि आफ्नो घर जाऊ।” १२ तब ऊ जुरुक्क उठ्यो अनि तुरुन्तै आफ्नो खाट बोक्यो र सबैले देख्ने गरी त्यहाँबाट हिंडेर बाहिर निस्क्यो। यो देखेर तिनीहरू आश्चर्यचकित भए र परमेश्वरको महिमा गर्दै भन्न थाले: “यस्तो त हामीले कहिल्यै देखेका थिएनौं।” १३ उहाँ फेरि समुद्रको छेउमा जानुभयो अनि भीडका भीड मानिसहरू उहाँकहाँ ओइरिन लागे र उहाँले तिनीहरूलाई सिकाउन थाल्नुभयो। १४ अनि जाँदै गर्दा उहाँले अल्फयसको छोरा लेवीलाई कर उठाउने ठाउँमा बसिरहेको देख्नुभयो र उहाँले तिनलाई भन्नुभयो: “मेरो पछि लाग।” तब तिनी उठेर उहाँको पछि लागे। १५ केही समयपछिको कुरा हो, उहाँ तिनको घरमा खान बसिरहनुभएको थियो र कर उठाउने* थुप्रै मानिस अनि थुप्रै पापी पनि त्यहाँ येशू र उहाँका चेलाहरूसित खान बसिरहेका थिए। तिनीहरू धेरै थिए र तिनीहरू उहाँको पछि लाग्न थाले। १६ उहाँलाई पापीहरूसित अनि कर उठाउने मानिसहरूसित खाइरहनुभएको देखेर फरिसीहरूका* शास्त्रीहरूले उहाँका चेलाहरूलाई यसो भन्न थाले: “उहाँले कर उठाउने र पापी मानिसहरूसित बसेर खानुहुन्छ र?” १७ यो सुनेर येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “बलियाहरूलाई डाक्टर चाहिंदैन तर बिरामीहरूलाई चाहिन्छ। म धर्मीहरूलाई होइन तर पापीहरूलाई बोलाउन आएँ।” १८ यूहन्नाका चेलाहरू अनि फरिसीहरू उपवास बस्ने गर्थे। त्यसैले उहाँकहाँ आएर तिनीहरूले सोधे: “यूहन्नाका चेलाहरू अनि फरिसीका चेलाहरू उपवास बस्ने गर्छन्‌ तर तपाईंका चेलाहरूचाहिं किन उपवास बस्ने गर्दैनन्‌?” १९ अनि येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “दुलहा आफूसँग होउन्जेल के तिनका साथीहरू उपवास बस्छन्‌ र? दुलहा आफूसँग होउन्जेल तिनीहरू उपवास बसदैनन्‌। २० तर यस्तो बेला आउनेछ, जब दुलहालाई तिनीहरूबाट अलग पारिनेछ, तब त्यस बेला तिनीहरू उपवास बस्नेछन्‌। २१ कसैले पनि पुरानो लुगामा नयाँ टालो सिलाउँदैन; किनकि त्यसो गऱ्यो भने नयाँ टालो सुकेर जाँदा त्यसले पुरानो लुगालाई तानेर झनै फटाउनेछ। २२ त्यसै गरी कसैले पनि नयाँ दाखमद्य* पुरानो मशकमा * राख्दैन। किनकि त्यसो गऱ्यो भने दाखमद्यले गर्दा मशक च्यातिन्छ अनि मशक र दाखमद्य दुवै खेर जान्छ। तर मानिसहरूले नयाँ दाखमद्य नयाँ मशकमै राख्छन्‌।” २३ एक चोटिको कुरा हो, उहाँ विश्राम-दिनमा गहुँको खेत हुँदै गइरहनुभएको बेला उहाँका चेलाहरू गहुँका बालाहरू टिप्दै हिंड्न थाले। २४ त्यसैले फरिसीहरूले उहाँलाई यसो भन्न लागे: “यहाँ हेर्नुहोस्, विश्राम-दिनमा गर्न नहुने काम गरेर तिनीहरूले किन नियम उल्लङ्घन गरिरहेका छन्‌?” २५ उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “के तिमीहरूले कहिल्यै पढेका छैनौ, आफू र आफ्ना मानिसहरू भोकाउँदा अनि खानेकुरा पनि केही नहुँदा दाऊदले के गरे? २६ के तिमीहरूले मुख्य पुजारी अबियातारको विवरण पढेका छैनौ, कि कसरी दाऊद परमेश्वरको भवनभित्र पसे र पुजारीहरूबाहेक अरूले खानु अनुचित भए तापनि परमेश्वरलाई चढाइएका रोटीहरू खाए अनि आफ्ना मानिसहरूलाई पनि केही दिए?” २७ उहाँले तिनीहरूलाई अझै यसो भन्नुभयो: “परमेश्वरले मानिसको फाइदा होस् भनेर विश्राम-दिन तोक्नुभएको हो तर विश्राम-दिन मान्नकै लागि भनेर मानिस सृष्टि गर्नुभएको होइन। २८ त्यसैले मानिसको छोरा विश्राम-दिनको पनि प्रभु हो।”
^ मर्कू २:१५ * त्यतिखेरका मानिसहरू कर उठाउनेहरूको इज्जत गर्दैनथे।
^ मर्कू २:१६ * इस्वी संवत्‌ प्रथम शताब्दीको यहूदी धर्मको एउटा प्रमुख पन्थ।
^ मर्कू २:२२ * वा, “अङ्गुरबाट बनेको मद्य।”
^ मर्कू २:२२ * जनावरको छालाबाट बनेको थैलो।